လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ ရှစ်လအတွင်း နိုင်ငံတော်အကျိုးအမြတ် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ခန့် ရရှိထားဟုဆို | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ ရှစ်လအတွင်း နိုင်ငံတော်အကျိုးအမြတ် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ခန့် ရရှိထားဟုဆို
နေပြည်တော်(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်)။ ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ (၈)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွက်ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် ပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ခန့် ရှိသည်ဟု သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိန်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းက ပြောသည်။
“၅. ၅ . ၁၆ မှ ၃၁ .၁ .၁၇ နေ့အထိ ကက်သုတ်ကြေးနီ ထုတ်လုပ်မှု ၂၃၂၆၆ ဒသမ ၅၀၄ မက်ထရစ်တန် အတွက် LME (London Metal Market) ရဲ့ ၃၁ .၁ .၁၇ နေ့ ပေါက်ဈေးဖြစ်တဲ့ မက်ထရစ် တစ်တန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၉၂၁ ဖြင့် တွက်ချက်မှုအရ နိုင်ငံတော်က ရရှိငွေ စုစုပေါင်း ၁၉၉၉၀၈၇၆ ဒသမ ၉၁ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးအုန်းဝင်းက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မြိုင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်ခင်ဝင်း က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ ရိုးရိုးသားသား၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးအမြတ် ၅၁ရာခိုင်နှုန်းကို မည်သည့် ခုနှစ်ကစပြီး ရရှိခဲ့သနည်း၊ ၂၀၁၆ မတ်လကုန် အစိုးရတာဝန်လွဲပြောင်းချိန်အထိ ဘယ်လောက်ရရှိခဲ့သနည်း၊ ၂၀၁၆တာဝန်လွဲပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်း ဧပြီလမှစ၍ မည်သို့ဆောင်ရွက်သွားမည်နည်ဟူသည့် မေးခွန်းအား လာရောက်ဖြေကြားစဉ် ဦးအုန်းဝင်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၏ ကြေးနီထုတ်လှုပ်မှုအပေါ် နိုင်ငံတော်က ၅၁ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ၄၉ရာခိုင်နှုန်း အချိုးဖြင့် ခွဲဝေရရှိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အကျိုးအမြတ် ၅၁ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀၁၆ မေလ ၅ရက် နောက်ပိုင်းမှသာ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးအုန်းဝင်းက လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် သတ္တူတွင်းထူထောင်မှု ကာလသည် ၂၀၁၀မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ (၃)နှစ်ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သတ္တုတွင်းထူထောင်မှုကာလကို ၂၀၁၀ မတ်လ ၅ရက်မှ ၂၀၁၆ မေလ ၄ရက်အထိ စုစုပေါင်း (၆)နှစ် (၂)လ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဟု ဦးအုန်းဝင်းကဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် စီးပွားဖြစ် သတ္တုထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ ၅ရက်က စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ ၅ရက်မှ ၂၀၁၇ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ နိုင်ငံတော်မှ အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့် ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၉၉၀၈၇၆ဒဿမ ၉၁ဖြစ်သည်ဟု ဦးအုန်းဝင်းက ဆိုသည်။
ဦးအုန်းဝင်း၏ ဖြေကြားမှုအပြီးတွင် မေးခွန်းမေးမြန်းသူ ဦးအောင်ခင်ဝင်းက သတ္တုတွင်းထူထောင်မှုကာလ သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် မည်သည့် စည်းမျဉ်း၊ မူဝါဒနှင့် တိုးမြှင့်ပါသလဲဟု တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း မေးခွန်း ထပ်မံမေးမြန်းခဲ့သည်။
ယင်းမေးခွန်းအပေါ် ဦးအုန်းဝင်းက “အဲ့ဒါကတော့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဒေသခံများနဲ့ မပြေမလည်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ တင်ပြပြီးတော့ အဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာ လုပ်ငန်းအခြေအနေသွားရောက်စစ်ဆေးပါတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ တစ်ကယ်ကိုပဲ ဘယ်လိုမှ လုပ်ငန်းက ပြီးဆုံးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲ တိုးတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့အကြား ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ရက်တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး သတ္တုတွင်းထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းမြေငှားခ တစ်နှစ်လျှင် ၂၉သိန်းနီးပါ...